संसदीय अंकगणित मिलाउन भारतको नाङ्गो हस्तक्षप: मध्यरातमा पाँच घण्टासम्म भारतीय दुताबास छिरेर के गरे विजय गच्छादारले? – ZoomNP
संसदीय अंकगणित मिलाउन भारतको नाङ्गो हस्तक्षप: मध्यरातमा पाँच घण्टासम्म भारतीय दुताबास छिरेर के गरे विजय गच्छादारले? प्रकाशित मिति: बुधवार, पौष २७, २०७३ समय - १६:५४:०५ काठमाडौ । संविधान संशोधनमा ब्यवस्थापिका संसदभित्र गणितिय खेल सुरु भइरहेका बेला मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष बिजयकुमार गच्छदारले भारतीय दूतावास लैनचौरमा पाँच घण्टा बिताएका छन् । सोमवार साँझ भारतीय दूतावास लैनचौर पुगेका गच्छदार मध्यरातमा फर्केको स्रोतले बताएको छ ।
भारतीय राजदूत रंजित रेसँग लामो वार्तालाभ गरेका गच्छदारले सोमवार विहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका थिए । प्रचण्डसँगको भेटपछि उनी साँझ भारतीय दूतावास पुगेका थिए । विपक्ष दलको विरोध हुँदा हुँदै दर्ता भएको संविधान संशोधन बिधेयकका बिषयमा गच्छदार मौन बस्दै आएका थिए । उनले बिधेयकलाई संशोधन गरी टेबुल गर्नु पर्ने मत राख्दै आएका थिए ।
संविधान संशोधन बिधेयक पास गराउन भारतीय राजदूत रंजित रे यतिबेला निकै सक्रिय बनेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई बोलाएर उनले दूतावासमै डिनर मिटिङ पनि गरिरहेका छन् । मंगलबार गच्छदारलाई बोलाएर पाँच घण्टा छलफल गरेको स्रोतले बताएको छ ।
सत्तापक्षले जवरजस्ती संविधान संशोधन बिधेयक संसदमा टेबुल गरेपछि कुनै पनि हालतमा पास गर्न नदिने अडान प्रतिपक्ष दलहरुले लिएका छन् । उनीहरुको अडानलाई परास्त गर्न भारतीय राजदूत रंजित रे यतिबेला साना ठुला सवै दलहरुसँग भेटघाट गरिरहेका छन् ।
सरकारले ब्यवस्थापिका संसदमा संशोधन बिधेयक दर्ता गरेपछि पनि मधेसी मोर्चा असन्तुष्ट नै थिए । तर भारतीय राजदूत रंजित रेले मधेसी मोर्चाका नेताहलाई डिनर मिटिङमा बोलाएर मनाए । तर मधेसी मोर्चाको एक दल संघिय समाजबादी फोरम भने अझै असन्तुष्ट नै छ ।